Kedu ihe bụ CMS: njirimara, ụdị na nke dị mma maka eCommerce | ECommerce ozi ọma
Kedu ihe bụ CMS
Encarni Arcoya | 26/06/2021 13:01 | Emelitere ka 26/06/2021 13:03 | eCommerce
O doro anya na n'oge ụfọdụ, ị nụla ma ọ bụ kwuo okwu banyere CMS, ma ị maghị n'ezie ihe ọ pụtara. Mgbe ị mere mkpebi ịtọlite ​​eCommerce, okwu a dị n'ọtụtụ mkparịta ụka. Ma gịnị bụ CMS?
Ọ bụrụ na ị ka nwere obi abụọ banyere ihe ọ na-anọchite, ị maghị ihe ha bụ, ma ọ bụ njirimara ya ma ọ bụ uru ya ma e jiri ya tụnyere teknụzụ ndị ọzọ, ọ bụ oge ị ga-amalite ịghọta ihe niile. Ma, n'ihi nke ahụ, na-esote anyị ga-ekwu maka ya Kedu ihe bụ CMS na ihe niile metụtara nke a ka ịmara.
1 Kedu ihe bụ CMS
2 Olee otu CMS si arụ ọrụ
3 Kedu njirimara ha nwere
4 Kedu CMS ka mma maka eCommerce?
4.2 WordPress CMS na Woocommerce
Maka ndị na-ebido ebido, CMS na-anọchi anya "Usoro njikwa ọdịnaya", nke a sụgharịrị n'asụsụ Spanish dị ka «usoro njikwa ọdịnaya». Gịnịkwa ka ọ bụ? Ndị a, dịka i nwere ike iche n'echiche, bụ ngwa ọrụ maka mepụta mkpokọta, jikwaa ya ma jikwaa ihe niile dị n'ime ya. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, anyị na-ekwu maka sistemụ na-ahụ maka iwu websaịtị ị nwere ike ijikwa, oge ụfọdụ n'amaghị mmemme.
Ọtụtụ ndị mmadụ na-eji CMS mepụta weebụsaịtị ha, ebe ejighị ya naanị maka web peeji nke "nkịtị", kamakwa maka blog, eCommerce, wdg. Na mkpokọta, maka ibe ọ bụla chọrọ mmelite mgbe niile, ngwaọrụ ndị a bụ ihe ịga nke ọma. Ọ bụ ya mere ị ga - eji chọta ụdị CMS dị iche iche, dabere na ibe: enwere maka blọọgụ, maka ibe ụlọ ọrụ, maka eCommerces, maka ọdịnaya ọdịnaya ... Ihe kachasị mkpa ga-abụ:
Olee otu CMS si arụ ọrụ
Ugbu a ị matara ihe CMS bụ, oge eruola ka ị ghọta etu ha si arụ ọrụ. Ihe kachasị mma bụ inye gị ihe atụ. Were ya na ị ga-emepụta weebụsaịtị akwụkwọ. Ka ị na-ebupụta akwụkwọ ọhụrụ n'ahịa, ị ga-emepụta ibe weebụ gị na nke ahụ na-ewe oge n'ihi na ị ga-emepụta usoro HTML, nyochaa na ọ na-arụ ọrụ, jikọta ya na ibe ahụ dum, tinye njikọ ndị dị mkpa na isi ... Bịa, ọ nwere ike iwe otu awa Dịka opekempe. Ma gịnị banyere CMS? Ọfọn, ọ ga-abụ ihe dị ka nkeji ise n'ihi na ọ na-azọpụta gị usoro niile nke imepụta ibe ahụ site na ncha, n'ihi na ọ bụ onye na-elekọta mmemme ahụ. Naanị ị ga-agwa ya ụdị ọdịnaya ibe ahụ kwesịrị ịnwe, url na foto ya na ọ bụ ya.
Dị ka onye ọrụ, Gaghị echegbu onwe gị gbasara akụkụ teknụzụ, n'ihi na CMS na-elekọta nke ahụ; nke na-enyekwu gị oge iji lekwasị anya na nchekwa data, ọdịnaya na atụmatụ iji mee ka web wee pụta ìhè.
Kedu njirimara ha nwere
Dabere na ihe niile dị n'elu, enwere ike iji CMS mara:
Nwee ike ịmepụta ibe weebụ na ibe dị n'ime ha.
Dezie ederede na Koodu nke weebụsaịtị iji jikwaa ya.
Okwu na-adịghị mma.
Wụnye plugins na-eme ka ọrụ nke saịtị ahụ dịkwuo elu (dịka ọmụmaatụ, n'ihe banyere WordPress, na Woocommerce, ị nwere ike mfe iwulite eCommerce).
Mfe nke ịmụta iji ya. Na mbụ, ọ na-eweta ntakịrị, mana mgbe ahụ ị ghọtara na ọ dị nghọta, ma dịkwa mfe iji, nke na-enye onye ọ bụla ohere ijikwa ya.
Obere ihe oriri. Ọ bụghị naanị n'ihi na ọ ga-efu gị obere ihe, ọ ga-echekwa oge, kamakwa n'ihi na ihe nkesa na-eweta ga-eji obere akụrụngwa na nke ahụ ga-eme ka ebe nchekwa gị, CPU na diski ike ghara ịdị oke mma, na-egosi webụsaịtị gị ngwa ngwa.
Kedu CMS ka mma maka eCommerce?
Anyị abịarutewo ajụjụ ahụ na, n'enweghị obi abụọ ọ bụla, ị nwere ike ịjụ onwe gị ugbu a. Kedu ihe kacha mma CMS maka eCommerce? Eziokwu bu na azịza ya dị oke mgbagwoju anya.
Ọ bụrụ na anyị lelee sistemụ njikwa njikwa lekwasịrị anya na ụlọ ahịa dị n'ịntanetị, anyị kwesịrị ịgwa gị na ị ga-anọ n'etiti Prestashop, WordPress + WooCommerce na Magento. Atọ ndị a bụ ndị na-achịkwa ahịa eCommerce, na ha niile, ikekwe Prestashop bụ nke na-aga nke ọma. Mana WordPress dị na ikiri ụkwụ ya. Na, naanị site na ịwụnye ngwa mgbakwunye, ị nwere ụlọ ahịa dị n'ịntanetị yana atụmatụ niile nke usoro njikwa ọdịnaya. Ma ọ dị mfe ịrụ ọrụ na ya.
Kedu nke kachasị mma? Anyị na-enyocha ha.
Prestashop bụ otu n'ime CMS nke na-elekwasị anya na azụmaahịa kọmputa, ya bụ, ọ dabere na ịmepụta weebụsaịtị maka ụlọ ahịa n'ịntanetị, eCommerces, wdg.
Iji mee nke a, ọ na-akọwapụta usoro nhazi nke mmadụ niile na-ahụkarị, mana na-enye gị ngwaọrụ iji wụnye plugins ma ọ bụ modulu, yana ndebiri, nke na-ahazi saịtị ahụ dabere na ihe ịchọrọ ire na otu esi enye ndị ahịa ahụmịhe ịzụ ahịa.
Teknụzụ ọ na-esiri ike iji, karịsịa na mmalite. Ọ chọrọ ụfọdụ ihe ọmụma banyere CMS, ihe ọtụtụ mmadụ na-amaghị, yabụ ọtụtụ ohere ijikwa ya 100% furu efu. Ma, o sighị ike ịmụ ihe, ọ na-ewe oge iji mee ya.
WordPress CMS na Woocommerce
WordPress, iji kpoo, taa bụ njikwa njikwa ọdịnaya kachasị eji n'ihi na ọ dị mfe iji na, ekele maka plugins na ọtụtụ puku ndebiri (n'efu na akwụ ụgwọ) dị, ọ dị mfe ịhazi na imeghari dịka mkpa si dị onye ahụ nwere.
Na mbu, a lekwasịrị anya na ibe weebụ na blọọgụ, mana na ọdịdị nke ngwa mgbakwunye Woocommerce, enwere mgbanwe. Ma ị nwere ike iji WordPress dị ka a ga - asị na ọ bụkwa ụlọ ahịa dị n'ịntanetị. Nke ahụ pụtara na ị nwere ike ịga n'ihu na-eji saịtị dị mfe ijikwa na, site n'ịgbasa ọrụ ya, na-erite uru site na ịdị mfe ahụ.
Nanị ihu ala anyị nwere ike itinye bụ na mgbe mgbe, ngwa mgbakwunye Woocommerce gbagwojuru anya iji wụnye, ọkachasị n'ihe gbasara itinye ngwaahịa, yana izipụ data, mmefu, wdg. Nke ahụ nwere ike imetosi. Mana enwere ọtụtụ nkuzi na thatntanetị nke nwere ike inyere gị aka idozi nsogbu ahụ, yana ịbụ onye kensinammuo, a na-amụta ya ngwa ngwa iji dozie ya, ihe na, mgbe ụfọdụ, na PrestaShop ọ na-ewe oge iji nweta ya.
Ugbu a na ị maara ihe CMS bụ, na ị makwaara ihe ha pụtara site na okwu ahụ, ọ bụrụ na ị na-eche maka ịmepụta ibe weebụ, ihe ọ bụla ọ bụ, ị ga-enwe ike ịmata onye kachasị mma maka gị dabere na gị ihe omuma nke teknụzụ, mmemme, ojiji ...
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » eCommerce » Kedu ihe bụ CMS
Mgbasa ozi n'ịntanetị
Ndị ụlọ ọrụ na-eji netwọk mmekọrịta